महाभूकम्प : चोट र अवसर
२०७२ सालमा हजारौंको ज्यान लिने गरी कहालीलाग्दो भूकम्प गएको आज दुई वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ बैशाख १२ गतेका दिन नेपाल र
नेपालीलाई जरैदेखि हल्लाएर बिक्षिप्त बनाउने गरी गएको भूकम्पको कहालीलाग्दा दृश्यहरु अझै पनि नेपालीजनको मानसपटलबाट हट्न सकेका छैनन् । भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउनेहरुका आफन्तका....
भोट बैंक मात्र कोशी पीडित !
स्थानिय तहको चुनाव वैशााख ३१ मा हुने भएसँगै नेपाली राजनीतिमा दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानिय तहको चुनावको माहोल विस्तारै–विस्तारै कोशी छेउको बराह नगरपालिका क्षेत्रमा पनि तातिँदै आएको छ । शीर्ष पार्टीका नेताहरुदेखि साना पार्टीका नेताहरु पनि आश्वासनका पोका बोकेर भोट बैंक कब्जा गर्न सक्रिय भइसकेका....
महिनामा २२ लाख कमाउने योजना किन निजीलाई दिँदैछ उपमहानगरपालिका ?
देशमा स्थानिय चुनावको चर्चा छ । सबै राजनीतिक दलहरु एकले अर्कोलाई उछिन्ने मौका र अवसरको पर्खाइमा छन् । एकले अर्काको विरुद्ध बिर्सिइसकेका मुद्धा र घटनाहरु ब्युँताउने प्रयासमा छन् । यस्तो बेलामा पनि इटहरीका राजनीतिक दलबिच चाहिँ एउटा अनौठो मिल्ती नगरको जल्दोबल्दो समस्यामा देखिन्छ । त्यो....
सिपाही बन्ने कि सारथी ?
करिब दुइ दशक लामो समय जनप्रतिनिधिविहिन स्थानिय सरकारको खोजी तिब्र बन्दै आएको छ । नेपाल सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै स्थानिय स्तरमा राजनीतिक दलहरु जुर्मुराउन थालेका छन् । वडादेखि नगरसम्मका जनप्रतिनिधि को र कस्ता भन्ने विषय सर्वत्र चर्चाको विषय....
महिलाले नेतृत्व गर्न सक्दैनन् र उपमेयरमा थन्काउने ?
एउटा गीत खुबै गुनगुनाउने गर्छु । आजसम्म गीतको भाव बुझ्ने प्रयास गरेको भने छैन, गर्ने चेष्टा पनि गर्दिनँ । ‘आमा दिदी बहिनी हो, कत्ति बस्छौ दासी भई ...’
हुन त आधा आकाश ढाक्ने महिला, असल महान मानिस जन्माउने पनि महिला । संस्कार सिकाएर प्रगतितर्फ....
छोरी भएर जन्मन पाउने कि नपाउने पनि पुरुषको निर्णय ?
नेपालको इतिहासकै अविस्मरणीय वर्ष २०७२/७३ बनेको छ । पहिलो कुरा ०७२ सालको प्रारम्भमै आएको महाभूकम्पले सम्पूर्ण नेपाली जनमानसमा त्रास पैदा गरायो । हजारौँको ज्यान लियो, सोही संख्यामा अंगभंग भए भने लाखौँ नेपालीहरु घरबारविहिन बने ।
महाभूकम्पको मारमा परेका जनतालाई पर्याप्त राहत उपलब्ध गराउन नसकेपछि आक्रोशित....
संस्कृतिमा धनी हामी नेपाली
नेपाल परापूर्वकालदेखि अनेकतामा एकता, सद्भाव र सहिष्णुताले भरपूर देश हो । नेपाली समाजमा मौलिक विविधतामा एक विशेषता रहँदै आएको छ । नेपालमा बसोबास गर्ने मानिसहरू प्राचीनकालदेखि नै विविधतामा एकताको रूपमा रहँदै आएको पाइन्छ । धर्म र दर्शन, धर्म र संस्कृति, भाषा र साहित्य, कला र कलाकारिता,....
महिला हुनु भनेको अभागी र चरीत्रहीन हुनु हो ?
म जस्तै प्रायः धेरैको दैनिकी पत्रिका तथा अनलाइनका समाचार पढेर सुरु हुने गर्छ । अस्ति मात्र द काठमाण्डौ पोष्टमा भोजपुरकी ११ वर्षीया बलात्कृत बालिका गाउँ निकाला भएको र बालिका बिचल्लीमा परेको समाचार प्रमुखताका साथ प्रकाशित भयो । हिजो मात्र अन्नपूर्णमा करोडै खर्चेर बनाइएको छाउगोठ फेरी....